Khaladaadka Muuqaalka iyo Dhibaatooyinka - DataNumen
Bogga ugu weyn Products DataNumen Outlook Repair Khaladaadka Muuqaalka iyo Dhibaatooyinka
Liiska oo Dhamaystiran Khaladaadka iyo Dhibaatooyinka ku jira Muuqaalka Faylasha PST
Markaad isticmaasho Microsoft Outlook si aad u furto a fayl shaqsiyeed kharribmay (PST), waxaad arki doontaa farriimo qalad kala duwan, oo laga yaabo inay kugu yara wareersan yihiin. Sidaa darteed, halkan waxaan isku dayi doonnaa inaan soo taxno dhammaan khaladaadka suurtagalka ah, oo loo kala sooco iyadoo loo eegayo inta jeer ee ay dhacaan. Khalad kasta, waxaan ku sharixi doonnaa astaamihiisa, sharxi doonaa sababtiisa saxda ah waxaanan siineynaa fayl muunad ah iyo waliba feylka ay goysay qalabkeena soo kabashada Muuqaalka. DataNumen Outlook Repair, si aad si fiican u fahmi karto. Hoos waxaan ku isticmaali doonaa 'filename.pst' si aan ugu muujino magaca faylkaaga musuqmaasuq ee 'Outlook PST'.
Faylka xxxx.pst ma aha feylal fayl shaqsiyadeed.
Khaladaad ayaa lagu ogaaday feylka xxxx.pst. Jooji Muuqaalka iyo dhammaan codsiyada ku shaqeeya boostada, ka dibna isticmaal aaladda dayactirka Inbox (Scanpst.exe) si loo ogaado loona hagaajiyo khaladaadka faylka ku jira. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan qalabka hagaajinta Inbox, ka eeg Caawinta.
Microsoft Outlook ayaa la kulantay dhibaato waxayna u baahan tahay inay xirto. Waan ka xunahay dhibaatada.
Faylka xxxx.pst waa la heli waayey.
Ma awoodo inuu soo bandhigo galka. Faylka xxxx.pst lama heli karin.
xxxx.pst lama heli karo - 0x80040116.
Faylka xxxx.pst lama heli karin. Cilad xog. Jeegga shaqo dhimista ee 'Cyclic'.
Lama balaarin karo galka. Xirmooyinka galka lama furi karo. Faylka xxxx.pst lama furi karo.
Ma dhaqaaqi karo walxaha. Shayga waa la dhaqaajin kari waayey Mar hore ayaa la dhaqaajiyay ama la tirtiray, ama marin loo diiday.
Ma dhaqaaqi karo walxaha. Ma guuri karo sheyga. Asalka asalka ah ama waa la dhaqaajiyay ama waa la tirtiray, ama marin loo diiday.
Ma dhaqaaqi karo walxaha. Waan dhammayn kari waayey hawlgalka. Hal ama in ka badan qiyaasta qiyaasta sax ma aha.
Muuqaalka PST /OST faylka waa gaabis ama lama jawaabo.
In kasta oo Microsoft ay bixiso Qalabka Dayactirka Sanduuqa (Scanpst.exe) si loo xalliyo dhibaatooyinka ku jira faylasha PST ee musuqmaasuqa ah, uma shaqeyn karo most kiisaska. Blowga ayaa had iyo jeer la kulma dhibaatooyin markii Qalabka Dayactirka Sanduuqa uu shaqeyn waayo:
Qalabka Dayactirka Sanduuqa ma aqoonsana faylka xxxx.pst…
Cilad lama filaan ah ayaa hor istaagtay gelitaanka faylkan. U adeegso ScanDisk si aad u hubiso diskiga khaladaadka, ka dibna isku day inaad mar kale isticmaasho qalabka Dayactirka Sanduuqa.
Khalad ayaa dhacay kaas oo sababay in iskaanka la joojiyo. Wax isbedel ah laguma sameynin feylka la marsiiyey.
Qalabka Dayactirka Sanduuqa (Scanpst.exe) si aan dhammaad lahayn ayuu u laalaadaa kumana sameeyo dayactirka.
Faylka PST ee lagu hagaajiyay Qalabka Dayactirka Sanduuqa (Scanpst) waa faaruq ama kuma jiraan waxyaabaha la doonayo.
Scanpst waxay soo tebineysaa "Khalad Fatal 80040818" markii la isku dayayo in la hagaajiyo faylka PST.
Warbixinta Scanpst “Cilad aan la aqoon ayaa hor istaagtay gelitaanka faylka. Cilad 0x80070570: Faylka ama galka waa kharribmay oo lama akhrin karo ”.
Khasaaraha xogta markaad isticmaaleyso Qalabka Dayactirka Sanduuqa (Scanpst.exe) si loo hagaajiyo faylasha PST ee musuqmaasuqa ah.
Intaa waxaa dheer, markaad isticmaaleyso Microsoft Outlook, waxaad sidoo kale la kulmi kartaa dhibaatooyinka soo socda si isdaba joog ah, oo lagu xallin karo DataNumen Outlook Repair si fudud.
Dhibaatada faylka PST ee xad dhaafka ah (cabirka faylka PST wuxuu gaarayaa ama ka badanayaa xadka 2GB).
Emailada Muuqaalka iyo waxyaabaha kale waxaa lagu tirtiraa qalad.
Ha iloobin ama lumin sirta ama macluumaadka login ee faylka PST.
Intaas waxaa sii dheer, markaad isticmaaleysid taleefankaaga gacanta si aad ugula jaanqaadi karto xogta Microsoft Outlook ee kombuyutarkaaga, sidoo kale waad lost emayllada iyo waxyaabaha kaleba sababo la xiriira khaladaadka is-waafajinta ama cilladaha software-ka. Xaaladda noocaas ah, sidoo kale waad sameyn kartaa isticmaalka DataNumen Outlook Repair inuu ka soo kabsado lost items.
Mararka qaarkood, markii aad la kulanto dhibaato Muuqaal, way yar adag tahay in la ogaado sababta dhabta ah. Xaaladda noocaas ah, waad awoodaa tallaabo tallaabo tallaabo ugu baar oo aad ku ogaato waxa ka khaldan Muuqaalkaaga.